Fikarohana momba ny firaisana Ny fifohazana ny nandevenana sy ny raharaha momba ny fanambadiana gorohan-doha amin'i Sobha Ram Jasbir Jat - Fikarohana momba ny vatana vaovao
From: Feno roapolo ny soso-kevitra momba ny fanambadiana, avy amin'i Ian Stevenson, MD
Article amin'ny Walter Semkiw MD, from ateraka indray
Ity dia tranga tsy dia mahazatra raha ny fampidirana ho faty ny vatan'ny maty, izay an'i Jasbir Jat, ary ny fiheverana an'io vatana io amin'ny alalan'ny fanahy hafa, izay ny anarany teo aloha dia i Sobha Ram.
Noho izany, ity dia tranga iray momba ny firaisana amin'ny vatana vaovao izay ahafahan'ny fanahy "mandehandeha" haka ny vatana izay efa niorenan'ny fanahy hafa teo aloha. Ny literatiora fitsaboana amin'ny alàlan'ny famerenam-bahaolana taloha dia voalaza fa "mandeha an-tongotra", na dia amin'ny ankapobeny aza dia tsy misy ny fahafatesan'ny olona iray. Fa kosa, amin'ny famerenana ny literatiora, dia voalaza fa ny fanahy iray mipetraka amin'ny mpilatsaka an-tsitrapo iray dia mandao io vatana io mba hahafahan'ny fanahy hafa mifankatia amin'ny fampiasana io vatana io ihany.
Ny foto-kevitry ny walk-ins dia adihevitra iray mampiady hevitra, satria mety hisy ny adihevitra raha tena misy ny fitsangatsanganana marina na ny fisehoan-javatra dia mampiseho aretim-pitsaboana ara-pahasalamana, toy ny marary maro an'isa.
Ny raharaha Sobha Ram | Jasbir Jat manome porofo matanjaka fa ny fitsangatsanganana dia zava-misy marina. Ian Stevenson, MD dia nandinika ity tranga ity tamin'ny antsipiriany ary namoaka izany tao amin'ny bokiny miafina, Feno roapolo ny soso-kevitra momba ny fanambadiana. Ian Stevenson dia nisafidy ny hampiasa fehezanteny iray hafa, "hanova tarehy indray," mba hamaritana ity karazana tranga ity, izay misy fanahy iray mamoaka vatana mba hahafahan'ny fanahy iray hafa mandresy.
Ny fiainan'i Sobha Ram
Sobha Ram dia niaina tao amin'ny tanàna ambanivohitr'i Vehedi any amin'ny faritra avaratra atsinanan'i Inde izay any Nepal. Vehedi tamin'izany fotoana izany dia nanana mponina 2000 ary valo kilaometatra avaratry ny tanàna Muzaffarnagar, izay manana mponina 3 tapitrisa.
Ny rain'i Sobha dia i Shankar Lal Tyagi. Sobha dia nanambady ary nanan-janaka antsoina hoe Baleshwar. Ny fianakaviana dia Brahmin ary narahin'izy ireo ny fomba amam-panaon'ity caste ity, anisan'izany ny fihinanana sakafo novokarin'ny Brahmins hafa, ny fanangonana kitapo metaly fotsiny, fa tsy tavoahangy, ary ny fanaovana kofehy masina manodidina ny tendany.
Ny sahan-tranon'ny fianakaviana dia tao an-tanàna, izay nizarazara avy tamin'ny saha natsangan'ny mponina hafa. Sobha dia nanana kalesy fialam-boly, izay nampiasaina ho an'ny fampakaram-bady. Tamin'ny May 1954, dia nitondra ny kalesiny nankany an-tanànan'i Nirmana izy, izay nipetrahan'ny fianakaviany haka ny ampakarina amin'ny lanonana fampakaram-bady izay nitranga tao Muzaffarnagar.
Teny an-dàlana avy any Nirmana ka hatrany Muzaffarnagar, nianjera avy tao anaty fiara i Sobha ary nijaly tamin'ny lohany. Afaka nanohy ny sehatry ny fampakaram-bady izy ary taorian'izany dia afaka namerina izany tany amin'ny tanàna misy azy izy. Ora vitsy taorian'ny niverenan'i Sobha tany Vehedi, dia maty izy. Tsy nijanona tao an-tanàna ny firaketana ny fahaterahana sy ny fahafatesana, saingy araka ny datin'ny mariazy, Dr. Stevenson dia afaka nametraka ny datin'ny fahafatesana tamin'ny May 22nd na 23rd tao amin'ny 1954.
Ny Fahafatesan'i Jasbir Jat
Jasbir Jat, zanak'i Girdhari Lal Jat, dia teraka tao amin'ny 1950. Nipetraka tao Rasulpur ny fianakaviany, izay nanana mponina 1500 tamin'io fotoana io ary mipetraka manodidina ny 8 miles atsimoandrefan'i Muzaffarnagar. Ny fianakaviana dia anisan'ny Jat Vondrona Hindou, ary Hindu, na dia kely kokoa noho ny Brahmins aza.
Tamin'ny lohataona 1954, fony Jasbir dia 3 1 / 2 taona, dia noheverina fa niharam-pananana izy nendra ary hita fa maty izy. Raha toa tsy nisy aina ny vatan'i Jasbir, dia nampidirin'ny rainy, Girdhari, ny fanampian'ny rahalahiny sy ny mponina hafa mba handefa ny zanany "maty". (1)
Rehefa nandinika an'ity raharaha ity i Ian Stevenson dia nanontaniany tamin'ny fianakavian'i Jaspir ny fomba nanapahan'ny mponina tao Rasulpur ny fahafatesany. Nolazaina tamin'i Stevenson fa niantehitra tamin'ny fijanonan'ny fofonaina izy ireo, ny fampangatsiahana ny vatana ary ny tsy fahafahany manokatra ny valanoran'ilay maty, izay mety hanondro ny rise mortis. Araka izany dia hita fa ny fahatapahan-kevitra fa maty i Jasbir dia tokony ho marina.
Fananganana ny fatin'i Jasbir
Hatramin'ny efa hariva tamin'ny takariva, nanapa-kevitra ny hanemotra ny fandevenana hatramin'ny maraina. Ora vitsy taty aoriana dia nahatsikaritra ny fanamafisana ny vatana i Girdhari ary i Jasbir dia niarina tsikelikely. Nandany andro maromaro talohan'ny nitorian'i Jasbir ary herinandro maromaro talohan'ny nifampiresahany tsara.
Ny fianakaviana dia tsy nanoratra ny daty marina niainan'i Jasbir ny fahafatesany sy ny fifohazana. Mifototra amin'ny vaovao azo omena, Ian Stevenson dia nanombantombana fa nitranga io tamin'ny volana Aprily na Mey 1954.
Fitsangatsanganana amin'ny Revelarnasiona: Sobha Ram dia mitombo ao amin'ny vatan'i Jasbir Jat
Rehefa afaka nifampiresaka tamin'ny farany i Jasbir, dia nasehony fa niova tanteraka ny toetra sy ny fihetsika. Nilaza izy fa zanak'i Sankar avy any ambanivohitr'i Vehedi izy ary te handeha any amin'ilay tanàna. Ankoatra izany, nanao izao fanambarana izao izy amin'izao fotoana izao, toy ny hoe: "Zanak'i Shanker of Vehedi aho." (2)
Niteny tamin'i Girdhari rainy tamin'ny farany izy fa Sobha Ram no anarany. Nilaza i Jasbir fa nanana vady izy ary avy any Molna, izay marina ho an'ny vadin'i Sobha Ram. Na dia kely noho ny 4 taona aza i Jasbir dia nanondro ny tenany ho olon-dehibe ary niresaka momba ny fananana zanaka, ankoatra ny vady.
Talohan'ny nifindrany, i Jasbir dia nanao toy ny ankizy tsotra ary tia milalao kilalao. Taorian'izay, tsy tiany ny milalao kilalao na ankizy hafa.
Niteny tamin'ny fianakaviany i Jaspir fa Brahmin izy fa tsy Jat, ary nalainy ny fahazaran-dratsin'ny olona iray avy amin'ny sarin'ny Brahmin. Nangataka izy fa olon-kafa iray ihany no avy amin'ny Brahmin caste mahandro sakafo. Tsy nihinana sakafo namboarina tao anaty tany izy, fa ny sakafo ihany no vita amin'ny vilany sy vilany. Nanomboka nanao kofehy masina teo amin'ny tendany izy, izay mampiavaka ny Brahmin.
PFahatsiarovana ny fiainana: ny fanjakana Jasbir dia nianjera tamin'ny kalesy sy maty
Nilaza i Jasbir fa maty izy rehefa lavo tamin'ny kalesiny rehefa niverina avy amin'ny fampakaram-bady izy ary namely ny lohany tamin'ny tany. Ankoatra izany, nilaza i Jasbir fa ny antony nianjerany tamin'ilay fiara dia ny lehilahy iray izay nanefa ny volany dia nanome azy ireo zava-mamy misy poizina. Ny poizina dia nahatonga azy ho tezitra, izay nitarika ny fianjerany. Nilaza i Jasbir fa tsaroany mazava fa niala tamin'ny kalesiny izy ary nantsoina hoe Dabal Pathak, izay tany amin'ny lalana Nirmana niverina tany an-tranony.
I Jasbir dia nanome famaritana momba ny tanàna sy ny trano nipetrahan'izy ireo taloha. Nilaza izy fa nisy mpihandro tao an-tanànany, izay tena nanan-danja, satria tsy nisy mpanamory tao Rasulpur. Nolazainy fa tao anaty tany no nisy lavadrano iray, izay tao an-trano ary tao ivelan'ny trano, izay notsongoin'i Ian Stevenson dia tsy fahita firy ho an'ny toeram-pitsaboana any India. Nilaza i Jasbir fa tao ambadiky ny fananany dia nitombo ny hazo iray, ary koa ny hazo tamarind. Marina avokoa ireo fanambarana ireo ho an'ny Vehedi sy ny trano nipetrahan'i Sobha Ram.
Ny voambolan'i Jasbir dia niova taorian'ny fiovany, tamin'ny fampiasany ny teny Brahmin fa tsy teny ampiasain'i Jats. Ohatra, ny teny hoe "haveli" no ampiasaina amin'ny teny hoe "haveli", fa tsy ny teny hoe "hilli", ny teny hoe "jat"; ny teny hoe fitafiana dia ampiasain'ny hoe "kapra" fa tsy hoe "latta." (3)
Soa ihany fa nahita fianakaviana Brahmin izay nanamboatra an'i Jasbir ilay fianakaviana. Izany dia nitohy nandritra ny herintaona sy tapany, mandra-pankasitrahan'i Jasbir tamin'ny faneren'ny fianakaviany hanoanana sakafo novokarin'izy ireo. Ny rain'i Jasbir dia nanandrana nitazona ny fihetsika tsy mahazatra nataon'ny zanany lahy, saingy ny fepetra takin'i Jasbir hihinan-kanina tahaka ny Brahmin nivoaka tamin'ny fiarahamonina Brahmin tao Rasulpur.
Fahatsiarovana ny fiainany taloha: Jasbir dia manambara ny nenitoany amin'ny fiainany toy ny Sobha Ram
Tokony ho telo taona taorian'ny nahafatesan'i Jasbir sy ny fisehoan'i Sobha Ram, vehivavy iray nitsidika ny Vehedi, tanànan'i Sobha Ram, dia nahare momba ny fihetsik'i Brahmin tampoka an'i Jasbir. Izy no Srimati Shyamo, Brahmin avy any Rasulpur izay nanambady lehilahy iray, Ravi Dutt Sukla, nipetraka tao Vehedi. Nitsidika ny fianakaviany tao Rasulpur i Srimati, toerana niainan'ny fianakaviana Jat, ary nolazaina momba an'i Jasbir, izay nilaza fa avy amin'ny Vehedi.
Rehefa handeha hitsena an'io zazalahy tsy mahazatra io i Srimati, dia niaiky avy hatrany i Jasbir fa "nenitoa" izy. Raha ny marina, dia nanambady havana akaikin'i Shankar Lal Tyagi, rain'i Sobha Ram, i Srimati, ka nisy fifandraisana ara-pirahalahiana teo amin'i Sobha sy Srimati.
I Whe Srimati dia niverina tany Vehedi, dia nampahafantatra ny vadiny sy ny fianakavian'i Tyagi tamin'ity ankizilahy ity izay nilaza fa i Sobha Ram, izay nilaza fa maty noho ny loza iray tamin'ny kalesiny.
Fahatsiarovana ny lasa: Jasbir dia manondro ny havan'i Sobha Ram amin'ny fitsidihany an'i Rasulpur ary manambara ny toerana misy harena sarobidy kely
Ny mpikambana tao amin'ny fianakaviana Tyagi dia nandeha tany Rasulpur mba hihaona amin'i Jasbir. Rehefa hitan'i Jasbir i Shankar Lal Tyagi nanatona, dia nilaza izy hoe: "Tonga ny raiko. Avy amin'ny Vehedi izy. "(5) Niditra tao an-trano i Jasbir ary nangataka ny hanomana sakafo Brahmin ho an'ny rainy.
Tsarovy fa i Shankar no rain'i Sobha. Jasbir dia nitantara tamin'i Shankar ny tantaran'ilay maty taorian'ny nianjerany tamin'ny kalesy rehefa niverina avy amin'ny fampakaram-bady. Nanampy izy fa tamin'ity diany ity, raha niditra tao an-trano izy hividy kabine iray ho an'ny lanonana fampakaram-bady, dia nisy alika iray nitomany azy. Shankar, rain'i Sobha, dia nanamafy fa marina izany; Tena nalain'ny alika tamin'ny mariazy i Sobha, araka izay nofaritan'i Jasbir.
Raha nahita an'i Ravi Dutt Sukla, ny vadin'i Srimati Shyamo, Jasbir dia namaritra tsara ny fifandraisan'i Ravi tamin'i Sobha. Raha nanatona an'i Santoshi Tyagi i Jasbir, dia nilaza azy ho dadatoany, izay fifandraisana marina teo amin'i Santoshi sy Sobha.
Rehefa tsy nahita an'i Rasulpur i Dadatoa Pritvi ary i Jasbir dia nahita azy, dia nihazakazaka nanatona azy i Jasbir ary niantso azy hoe "Mama", izay marina, satria teny indiana ho an'ny dadateny an-drenivohitra izany. (6)
Nasehon'i Jasbir avy eo fa izy (toa i Sobha) dia nindram-bola avy amin'ny Oncle Pritvi vola ary tiany haverina aminy izany vola izany. Jasbir dia nanambara ny toerana izay nafeniny ny vola tao amin'ny tany Tyagi. Taty aoriana dia nahita ny vola araka ny filazan'i Jasbir azy ny fianakaviana Tyagi.
Nanoloana ny fianakavian'i Tyagi, i Jasbir dia nanohy namerina ny anaran'ny fianakaviany nandritra ny androm-piainan'i Sobha. Nilaza i Jasbir fa i Sona no anaran-dreniny, nanana anabavy antsoina hoe Kela izy, ary nantsoina hoe Sumantra ny vadiny. Nanan-janaka lahy iray nantsoina hoe Baleshwar izy io, orana antsoina hoe Ram Kali, ary i Kirpi rafozany. Ireo fanambarana rehetra ireo dia marina ho an'ny fiainan'i Sobha Ram.
Fahatsiarovana ny fiainana tany am-boalohany: Hitan'i Jasbir ny fiainany taloha tany amin'ny Vehedi
Herinandro vitsivitsy taorian'ny nihaonan'ny fianakaviana Tyagi an'i Jasbir tao Rasulpur, dia nentina tany Vehedi izy. Tsy mbola tany Vehedi mihitsy i Jasbir teo aloha. Tao amin'ny gara, nasaina nitarika ny lalana mankany amin'ny trano Tyagi izy. Tsy nisalasala i Jasbir dia nandeha avy teo amin'ny seranam-piaramanidina mivantana nankany an-tananan'i Tyagi, izay manodidina ny 200 yards lavitra ny fiantsonana.
Taty aoriana dia nentina tany an-tranon'I Ravi Dutt Sukla tao Vehedi izy ary avy eo, Jasbir no nitarika ny lalana mankany amin'ny trano Tyagi tamin'ny lalana hafa.
Rehefa naseho ny sehatry ny fambolena tao Vehedi, i Jasbir dia afaka namantatra hoe iza avy ny fianakaviana Tyagi.
Fahatsiarovana ny fiainana taloha: nahafantatra sy namantatra ireo havan'i Sobha tao Vehedi i Jasbir
Tamin'ny Vehedi, Jasbir dia nanavaka tsara an'i Surajamal sy Mahendra Singh Tyagi ho zandrin'i Sobha, ary Swaroop Tyagi amin'ny maha-rafozan'i Sobha azy. Fantany i Birbal Singh ho zanak'olo-mpiray tam-po amin'i Sobha ary raha niditra tao amin'ny efitrano i Birbal, dia nihazakazaka nankany amin'i Jasbir i Jasbir ary niteny hoe: "Mandehana, Ganghiji." (Gangnamiji) Ganghiji dia anarana an-dalan'i Birbal, toa an'i Mahatma Gandhi.
Raha nanontaniana i Jasbir mba hamantatra olona hafa, dia hoy i Jasbir: "Ity no raibeko Rai Sahib, izay tena rain'i Sobha.
Jasbir dia nandany andro maromaro tao amin'ny Vehedi ary nampiseho ny fahalalana antsipiriany momba ny fianakaviana Tyagi sy ny raharahany. Tena nahafinaritra azy ny tenany ary tsy te hody izy. Hiverina hitsidika tsindraindray izy, matetika mandritra ny herinandro maromaro, ary nilaza izy fa te hiaina any. Mahatsiaro ho manirery sy mahatsiaro any Rasulpur i Jasbir, fa any Vehedi dia nahatsapa izy tao an-trano.
Jasbir dia namorona firaiketam-po mahery vaika tamin'ny fianakavian Tyagi ary manokana an'i Baleshwar, zanakalahin'i Sobha. Tamin'ny fitsidihany an'i Vehedi, Jasbir dia hiara-matory amin'i Baleshwar ao anaty fandriana ihany, izay nomarihin'i Ian Stevenson fa mety ho an'ny ray sy ny zanaka lahy, saingy tsy mendrika ho an'ny olon-tsy fantatra. Amin'ity fihetsika ity, Jaspir dia nitondra tena toy ny rain'i Baleshwar.
Indraindray, i Jasbir dia nandrahona ny handositra lavitra ny tranony mba hahafahany miaina ao amin'ny Vehedi. Ny fianakavian'i Jasbir dia sahiran-dava tamin'ny fifandraisany tamin'ny fianakaviany taloha izay tsy navelany hamangy an'i Sumantra vadiny, Sumantra, izay nody taorian'ny nahafatesany tany Molna.
Rehefa nandeha ny fotoana, dia nanaiky ny fianakaviana Tyagi fa naverina indray i Sobha tamin'ny alàlan'ny Jasbir ary heveriny fa i Jasbir dia mpikambana feno ao amin'ny fianakaviany. Rehefa nandinika ny fanambadiana i Baleshwar, i Jasbir, na dia zaza aza, dia nodinihina toy ny ray amin'ny ankapobeny. I Jasbir taty aoriana dia nanatrika ny lanonana fampakaram-bady an'i Baleshwar.
Ny fiainam-piainana Karma Repaid: Ilay lehilahy izay tezitra tamin'i Sobha dia mamerina amin'ny laoniny
Nanizingizina i Jasbir fa ny antony nianjerany tao anaty fiara dia satria lehilahy iray nanefa vola taminy no nanome azy sigara. I Jasbir dia nahatsiaro manokana hoe iza io lehilahy io, na dia tsy nomena ny anaran'i Ian Stevenson momba ity raharaha ity aza. Jasbir dia nilaza fa io lehilahy io dia tokony ho azy, toa an'i Sobha, rupees 600, ary ilay lehilahy dia nanapotika azy ny fikasana hamono azy ka tsy voatery haverina ny trosa. Ny fianakavian'i Sobha dia tsy nahalala na inona na inona momba ireo sigara misy poizina alohan'ny nanambaran'i Jasbir an'ity vaovao ity. I Jasbir dia nahita ity lehilahy ity izay nolazaina fa nanome baiko an'i Sobha. Tamin'ny fomba famerenana tamin'ny laoniny, dia nanome rofia Jasbir 600 io lehilahy io.
Ian Stevenson, MD dia tsy manaisotra ny hosoka amin'ity raharaha Reincarnation ity
Nanamarika ny Dr. Stevenson fa na dia 20 kilaometatra fotsiny monja aza ny tanànan'i Rasulpur sy Vehedi, toy ny totohondry, dia tena voasambotra izy ireo tamin'izany fotoana izany noho ny toetry ny lalana sy ny fitaovan'ny fitaterana. Ankoatra izany, samy foko sy antoko-foko samy hafa ny fianakaviana roa. Raha jerena ireo antony ireo, i Stevenson dia tsy nahita ny fomba mety hahalalan'i Jasbir, amin'ny latsaky ny 4 taona, ny fiainan'i Sobha Ram amin'ny fomba mahazatra.
Ankoatra izany, ireo mpikambana ao amin'ny fianakaviana roa ireo dia nijoro ho vavolombelona fa tsy nifankahalala izy ireo talohan'ny fahafatesan'i Jasbir sy ny fanovana.
Nanamarika i Stevenson fa ny zava-misy fanampiny izay hiadian-kevitra amin'ny fanoherana dia misy ny tsy fahasambaran'ny fianakavian'i Jasbir momba ny fitondrantenany Brahmin tampoka. Ankoatr'izay, ny fianakaviana dia tsy nino ny fanambarany momba ny fiainana hafa. Nananatra azy izy ireo ary nanandrana nanery ny vaovao momba ny fanovana nataony ho an'ny mpiara-monina aminy. Araka ny nomarihina, matahotra ihany koa izy ireo sao handao azy ireo i Jaspir ho an'ny fianakaviany taloha.
Fanahy Masina: Olona masina iray Manamora ny fanavaozan'i Sobha ao amin'ny vatan'i Jasbir
Tao amin'ny 1961, Ian Stevenson nanontany an'i Jasbir izay nitranga teo anelanelan'ny fahafatesan'i Sobha Ram amin'ny Vehedi sy ny fahatsiarovana azy tao Rasulpur, tamin'ny alàlan'ny vatan'i Jasbir. Nilaza i Jasbir fa taorian'ny nahafatesan'i Sobha taorian'ny nahafatesany, dia nihaona tamin'ny lehilahy saro-kenatra na masina izy, toa tany amin'ny tontolon'ny fanahy. Io lehilahy masina io dia niteny taminy mba "hanafina" ao amin'ny vatan'i Jasbir, zanak'i Girdari Lal Jat. (8)
Rehefa nanontany an'i Jasbir i Stevenson hoe inona no nitranga tamin'ny toetra amam-panao izay nipetraka tao amin'ny vatan'i Jasbir talohan'ny nandraisan'i Sobha azy, dia nilaza i Jasbir fa tsy fantany. Stevenson dia nanombantombana fa mety ho lasa olom-boafidy any aoriana any io olona io. Nanao fangatahana izy tao amin'ny faritra mikasika ny ankizy rehetra izay mety hahatsiaro ny fiainany teo aloha izay nahafatesan'izy ireo tamin'ny paompy teo anelanelan'ny taona 3 sy 4, saingy tsy nahita izany izy.
Jasbir dia nifandray tamin'ny Dr. Stevenson fa mbola nanohy nanonofy izy izay mbola hitany sy nifaneraseran'io lehilahy masina io ihany, izay hahalaza marina ny hoavy. Ohatra, ny raim-pianakavin'i Jasbir dia nanao hetsika mba hananganana fanambadiana mandamina an'i Jasbir, izay tsy nahaliana ny vadin'ny ho avy na i Jasbir. Nilaza i Jasbir fa tamin'ny nofy dia niseho ilay lehilahy masina ary nanome toky azy tsy hatahotra, Ny drafitry ny fanambadiana dia hianjera. Izany tokoa no nitranga.
Rehefa nieritreritra ny antony nahatonga an'i Sobha, Brahmin, indray naveriny tao amin'ny vatan'i Jasbir, izay anisan'ny fianakavian'i Jat, ambany ravina ambany, izay tsy dia tsara loatra noho ny fianakaviana Tyagi, dia namaly i Jasbir fa nahita izany izy ny demony. Tsy fantany akory anefa ny zava-nitranga, teo amin'ny fiainan'i Sobha, izay nanamarina izany sazy izany.
Mandeha an-tongotra na miseho ny fisintonana: Ankoatra ny tranga iray momba ny fanambadiana virijina, izay ahitana fanahy iray aseho amin'ny fampidirana ao amin'ny vatana roa isan-kerinandro, dia mitarika fitsangatsanganana ity tranga ity. Ny fitsangatsanganana na ny fifanakalozana toe-javatra miseho dia mifandray amin'ireto fanahy anankiroa ireto izay mitoetra ao amin'ny vatana iray ihany amin'ny lamina manaraka. Ny fanahy tany am-piandohana dia mamela ny vatana hamela fanahy iray hafa handray sy hampiasa izany vatana izany. Ireo tranga an-dalamby dia heverina fa tena tsy fahita firy.
Raha niaina tamin'ny 3 1 / 2 taona fotsiny i Jasbir talohan'ny nahafatesany, dia tsy nanana fahafahana hivoatra ny toetrany tany am-boalohany. Na ny fanahy izay nonina tao amin'ny vatan'i Jasbir talohan'ny nahafatesany dia tsy fantatra na inona na inona fifandraisana amin'ny fanahy an'i Sobha.
Famerenana amin'ny laoniny na fananganana vatana maty: Na dia tsy nandinika an'i Jasbir aza ny dokotera iray rehefa hita fa voapoizin'ny ranomandry izy, dia tsy nanana aina ny vatany raha toa ka vonona ny handevina an'i Jasbir ny rainy sy ny namany. Araka ny nomarihina etsy ambony, ny fepetra ampiasain'izy ireo hamaritana ny fahafatesana dia marimaritra iraisana, anisan'izany ny fampitsaharana ny fitsaboana, ny fanamafisana ny vatana ary ny tsy fahafahan'ny mpanadina hanokatra ny valanoran'ny maty. Araka izany, toa hita fa ny tapa-kevitra fa maty i Jasbir dia tokony ho marina.
Ny fifohazana nataon'i Jasbir dia tsy fantatra, na dia teo aza i Jasbir, taorian'ny fanovana nataony, dia nilaza fa nihaona taminy i sadha na olona masina iray taorian'ny nahafatesan'i Sobha ary namporisika azy haka ny vatan'i Jasbir.
Io fiverenan'ny hetsika io dia manontany ny amin'ny hoe ity lehilahy masina ity dia nandray anjara tamin'ny famerenana ny vatan'i Jasbir tsy nisy aina. Raha izany no izy dia mampitovy ireo fahagagana izay nanambara an'i Jesosy fa, araka ny Testamenta Vaovao, dia nitondra an'i Lazarosy ho velona indray ary nitondra ny tenany ho amin'ny fiainana tamin'ny alalan'ny Fitsanganana amin'ny maty.
Satria tsy nosoratana ny daty nahafaty an'i Jasbir, dia tsy mazava na oviana na oviana ny fotoana naharitra teo anelanelan'ny fotoana nahafatesan'i Sobha, izay tapa-kevitra ny hanao ny volana 22nd na 23rd, 1954, ary ny fiverenany amin'ny vatan'i Jasbir. Ian Stevenson dia nanombantombana fa ny fahafatesan'i Jasbir avy amin'ny paompy dia niseho tamin'ny Aprily na May 1954. Noho izany dia azo atao ny namonoana ny fahafatesan'i Sobha tamin'ny fotoana nahafatesan'i Jasbir, na dia tsy azo atao aza ny fifampizarana marina momba ny fandaharam-potoana.
Fahatsiarovana ny fiainana tany am-piandohana: I Jasbir dia afaka nahita ny làlany avy tao amin'ny gara tao Vehedi mivantana tany amin'ny trano fonenan'i Tyagi tsy misy fanampiana. Izany dia mampahatsiahy ny Anne Frank | Barbro Karlen raharaha momba ny vatana vaovao, raha vitan'i Barbro ny nitarika ny ray aman-dreniny tany amin'ny hotely any Amsterdam mivantana tany amin'ny Anne Frank House.
Famerenana ny fifandraisana amin'ny fiainana talohan'ny nahaterahana: Rehefa tafiditra tao amin'ny vatan'i Jasbir i Sobha dia tafaraka tamin'ny fianakavian'i Tyagi tamin'ny farany.
Fiovana eo amin'ny fiaraha-monina sy ny foko: I Sobha no anisan'ny sarangan'i Hindu Brahman avo indrindra ary nahita izany ho fanehoana fa nanjary Jat izy avy amin'ny sarivongan'i Hindu ambany, na dia fantany aza fa tsy nanao zavatra tsy nety izy izay mety hitondra ny sazy toy izany.
Vatana fanahy amin'ny raharaha momba ny Zandriny: Nitatitra i Sobha fa nanamora ny fampodiana azy tamin'ny vatan'i Jasbir ny fanahy.
Raha hijery ireo tranga hafa izay mampiseho ny fandaharam-piainana amin'ny fanahy, alaivo izany:
Fandrafetana ny fiainana miaina miaraka am-pitiavana amin'ny alàlan'ny Reincarnation
1. Stevenson, Ian: Folo-taona sivana manoloana ny fanamboarana ny fanambadiana indray, University of Virginia Press, Charlottesville, 1974, pejy 34